ဂူဂဲလ်ပလေးဝန်ဆောင်မှုများသည် "အာဏာသိမ်းမှု" အား Android 2.3 Gingerbread ကိုပေးသည် Androidsis
ဂူဂဲလ်ပလေးဝန်ဆောင်မှုများသည် "အာဏာသိမ်းမှု" ကို Android 2.3 Gingerbread ကိုပေးသည်
ဟိုဆေး Alfocea | | NOTICIAS, Android ဗားရှင်း
သူတို့ကယခုမှစ။ , သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပဏာမခြေလှမ်းပေါ်မှာပြုမိဘူးဆိုရင် Android 2.3 developer များက Android XNUMX Gingerbread နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအက်ပ်များအတွက်ဂူးဂဲလ်ပလေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးမပြုတော့ပါ.
Google ရှိပြီးသား ကြေညာခဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်၎င်းသည် ၂၀၁၇ အစောပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးယခုအပတ်တွင်စတင်အလုပ်လုပ်သောဂူးဂဲလ်ပလေးဝန်ဆောင်မှုများ ၁၀.၂ နောက်ဆုံးသတင်းများသည်၎င်းသည် Android 2.3 Gingerbread ကိုအထောက်အပံ့မပြုသည့်ပထမဆုံး version.
Gingerbread operating system ဖြင့်ဖုန်းကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သောလူအနည်းငယ်ကမူစိတ်ချနိုင်ကြသည်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုအသစ် သင်တပ်ဆင်ထားသည့်မည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုမှမွမ်းမံတော့မည်မဟုတ်သော်လည်းသင်၏ဖုန်းသည်အလုပ်ရပ်သွားလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ .
Android Gingerbread အထောက်အပံ့ပျောက်ကွယ်သွားသော်လည်းဂူးဂဲလ်ပလေးဝန်ဆောင်မှုများ (၁၀.၂) ကထပ်ပေါင်းထည့်သည် developer များကသူတို့ application အတွက်သုံးနိုင်သည်သောအင်္ဂါရပ်အသစ် Android အတွက် ဥပမာအားဖြင့်၊ Google ကြံ့ခိုင်မှု သူတို့ရဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေမှာအခုဆိုရင်သူတို့ဟာသွေးပေါင်ချိန်၊ သွေးဂလူးကို့စ်၊ အောက်ဆီဂျင်ပြည့်နှက်မှု၊ ခန္ဓာကိုယ်အနေအထား၊ အဆိုပါအသုံးပြု application များ Google Maps ကို သူတို့ယခုအချို့သောဒေသများရှိထုံးစံစတိုင်များထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ဂူဂဲလ်၏ Login API ကိုယခုအခါ Android ဂိမ်း developer များကအသုံးပြုနိုင်ပြီးထိုအက်ပလီကေးရှင်းများအတွက်ဆာဗာကိုစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လွယ်ကူစေသည်။ ကြော်ငြာကိရိယာများအတွက်အဆင့်မြှင့်မှုများမြောက်မြားစွာရှိသည်။
ဤပြောင်းလဲမှုအများစုသည် application developer များသာရည်ရွယ်သော်လည်း Android အသုံးပြုသူများအတွက်အကျိုးရှိမည့်တိုးတက်မှုများကိုခွင့်ပြုခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်ထင်ရှားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဂူဂဲလ်ပလေးဝန်ဆောင်မှုများသည် "အာဏာသိမ်းမှု" ကို Android 2.3 Gingerbread ကိုပေးသည်
Supercell's Clash Royale သည်ပထမနှစ်တွင်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံရရှိခဲ့သည်
MIUI 8.2၊ နောက်ဆုံးသတင်းများ၊ ဆိပ်ကမ်းများနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများကို OTA မှတစ်ဆင့်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်